My freedom: ကထိန်အလှူ
ဒီနေ့က အဖေတို့ ဗန်းမော်အသင်းကလုပ်တဲ့ ကထိန်အလှူ... သန်လျင်က ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မနက်စောစောထသွားကြတယ်။ အဖေဘက်က အမျိုးတွေနဲ့ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေပေါ့။ ဘုန်းဘုန်းတွေကို ဆွမ်းကပ်ပြီးတော့ တရားနာတယ်။
အမေက အလှူဟင်းတွေ ကန်ဒီစားမရမှာစိုးလို့ အိမ်ကထမင်းချိုင့်ထည့်လာပေးတယ်။ အလှူသွားတာတောင် အဲ့လိုကိုယ့်ထမင်းချိုင့်နဲ့ကိုယ် ဟဟ(xD)။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း ရီချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲ။ သားသတ်လွတ်ဆိုလို့ ကန်စွန်းရွက်ကြော်တစ်ခုပဲပါတာ... အဲ့ဒါပဲ ကန်ဒီစားလို့ရတယ်။ ကျန်တာ အသားတွေချည်းပဲ။ ကန်ဒီ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘာဆိုဘာမှဝင်မပြောဘဲ ယုံကြည်လက်ခံပြီး အစစအရာရာ လိုက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အမေ့ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
ကြောင်ကလေးက လက်သည်းဝှက်၊ ချောင်းလိုက်ရတဲ့ကြွက်...
အစက အလှူပြီးရင် သန်လျင်ရေလယ်ဘုရားသွားဖူးဦးမလို့ စီစဉ်ထားတာ... နောက်တော့ နေ့လည်နေအရမ်းပူတာနဲ့ မသွားဖြစ်တော့ဘဲ အိမ်ပဲပြန်လာလိုက်တယ်။ ညနေကျတော့ ကန်ဒီ့သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးနဲ့ သွားတွေ့တယ်။ ပြည်သူ့ရင်ပြင်က Myanmar Culture Valley မှာ... အဲ့ဒါအသစ်ဖွင့်တာလို့ ပြောတယ်။ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိတယ်။ ပန်းပုလေးတွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရှိတယ်။
Potato Break မှာ အာလူးစားပြီး အာလူးဖုတ်တယ်။ ရန်ကုန်ပြန်ရင် တွေ့စရာသူငယ်ချင်းဆိုလို့ သူပဲရှိတယ်။ ဟိုးးးပိစိကွေးထဲက သူငယ်ချင်း။ ဖြစ်ချင်တော့ ကန်ဒီရန်ကုန်ပြန်တဲ့အချိန်က အဖေနဲ့အမေ ညီမလေးမင်္ဂလာဆောင်အတွက် အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်။ ညဆို ဖိတ်စာမှာ နာမည်တွေကပ်၊ မနက်ဆို ဖိတ်စာလိုက်ဝေနဲ့... မင်္ဂလာဆောင်လုပ်ရတာလည်း မလွယ်ဘူးနော်...
ကန်ဒီကတော့ အပြင်ကပြန်ရောက်တာနဲ့ ရေမိုးချိုး၊ စကားလေးဘာလေးပြောရင်း ဖိတ်စာတွေကူကပ်ပေး... ပြီးရင်အိပ်တာပဲ။ သူတို့ကြည့်တဲ့ ကိုရီုးယားကားတွေလည်း မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။
Posted by Candy at 1:08 PM
Candy, you look so nice in Burmese dress. Would like to know the tailor you use if possible. Thanks
Thank you!! My mom just gave the design I like to her tailor. hehe. She is notadesigner or anything. Justatailor my mom always go for.
Thank you mama Iora.